Tarsan oo sheegay in loo diiday u tartamidda aqalka hoose ee barlamaanka – STAR FM SOMALIA
Star FM: Siyaasiga Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo Kursiga Xildhibaannimo ee Aqalka Hoose.
Mr Tarsan oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu afka dheer ayaa ku eedeeyay in Madaxweyne Xasan Sheekh in nidaamka siyaasada kaliya aanu musuq maasuqin, balse odayaasha dhaqanka iyo bulshada uu musuq maasuqay, taasoo uu tilmaamay inuu aad uga xun yahay.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ayaa dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay xisbi siyaasadeed, isagoo sheegay inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha, waxaa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta sida aad u dhaleeceynayay siyaasada Madaxweyne Xasan Sheekh.
Doorashooyinka kuraasta Aqalka Hoose ee ka socda deegaanada maamul goboleedyada ayaa laga soo diiwaan geliyay musuq maasuq iyo awood sheegasho, iyadoo meelaha qaar ay ka dhaceen shaqaaqado dhimasho iyo dhaawac sababay.
Ra’iisul wasaare Cumar C/Rashiid oo baaq u diray dadkii ka barakacay Gaalkacyo